Zouzar Valibhay: miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo | NewsMada
Zouzar Valibhay: miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo
Tena ahafantarana an’i Zouzar Valibhay, hatramin’izay, ny tontolon’ny hosodoko. Mifandray sy mifanerasera amin’ny sokajin’olona samihafa izy ary teo ny nahatsapany fa andraikitry ny tsirairay ny manarina ny firenena, amin’ny alalan’ny fitondrana ny anjara biriky tratry ny heriny.
Tamin’iny faran’ny herinandro iny, nizara sakafo sy akanjo ho an’ireo olona sahirana ao amin’ny fokontany Antsahavola i Zouzar Valibhay mivady. Ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana avokoa izy ireo ary niandraikitra ny fisafidianana ireo notoloranan fanomezana ny filohan’ny fokontany eny an-toerana.
Andraikitry ny olom-pirenena tsirairay ny ady amin’ny fahantrana. Manana anjara lehibe amin’izany ny mpanakanto, araka ny nambaran’i Zouzar Valibhay. Tsy vao izao fa efa ela izy ny miara-miasa amin’ny fikambanana samihafa, miahy ireo sokajin’olona sahirana. Santatra kosa ity tetikasa manokana, natombony tamin’ny asabotsy teo, ity.
Tanjony ny hanitatra ny hetsika toy izao ary ny hanangana toeram-pisakafoana maimaimpoana ho an’ireo olona sahirana. Mbola lavitra ezaka anefa izany, araka ny nambarany ary mitaky fifandraisan-tanana eo amin’ny samy mpiara-belona. Araka izany, manantena fiaraha-miasa amin’ny malala-tanana ity mpanao hosodoko ity.